Iintlanzi zeShubunkins | Ngeentlanzi
UViviana Saldarriaga | | Amanzi akwariyam akwariyam, Amanzi abandayo e-aquarium
Los Iintlanzi ze-shubunkins Ziintlobo zeentlanzi kusapho olunye njenge-Goldfish. Zizalelwe kubanda nakumanzi amatsha amazwe afana neJapan, nangona zinokufumaneka nakwezinye iingingqi zelizwekazi laseAsia. Ezi ntlanzi zinokufikelela kubukhulu obufikelela kwiisentimitha ezili-10 ubude, zinomzimba olungeleleneyo, kwaye zibonakaliswa ngokuba nomsila ophucuke ngakumbi kuneminye, ophantse ubonakale.
Iintlanzi ze-Shubunks zinamaxolo aselubala kunye nawentsimbi, enemibala eyahlukeneyo emzimbeni wawo apho ubukhulu becala kumnyama, ngwevu, bomvu, blue, orenji kunye nomhlophe, kunye namabala amnyama ajikeleze umzimba wawo wonke kubandakanya amaphiko azo. Ezi zilwanyana zisebenza kakhulu, ke ukuba ufuna ukuba nazo kwi-aquarium yakho, kufuneka zanele indawo yokuqubha. Ndikucebisa ukuba ukhethe ichibi ukuya kuthi ga kwiilitha ezili-100, ezinobushushu obungu-10 degrees okanye ngaphantsi, nge-pH eyi-6,5 enokunyuka iye kwi-7,5.
Ungalibali ukuba Ukuhonjiswa kwezi aquariums Kuya kufuneka babe nezityalo ezaneleyo zasemanzini, nangona kuthintela ukugqitha ukubanika indawo eyoneleyo yokuqubha. Isiziba kufuneka siphefumlelwe kakuhle kwaye sicoceke, ukuze izilwanyana zisempilweni. Ezi zilwanyana zincinci zizinto ezinoxolo kakhulu ezonwabileyo ukuhlala eluntwini, ke licebo elihle ukuba unemizekelo eliqela kwi-aquarium yakho ukuze bazive bekhululekile.
Ukuba uneekopi ezininzi zezi izilwanyana kwi-aquarium yakhoQiniseka ukuba unedama elikhulu, kuba njengoko besitshilo, ziintlanzi ezisebenza kakhulu ezifuna indawo eninzi yokuqubha nokuhamba ngokukhululekileyo. Iintlanzi zeShubunkins azifuni ngokutya obapha kona, zizilwanyana ezi-omnivorous ezinokuthi zitye ngokutya okuphilayo, isikali, iintlanzi ngamaqhekeza amancinci, phakathi kwezinye iimveliso. Andikukhuthazi ukuba ubanike iintshulube okanye iintshulube njengoko zinokuphela zibenza bagule kwaye babangele iingxaki emzimbeni wabo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Amanzi akwariyam akwariyam » Amanzi abandayo e-aquarium » Iintlanzi zeShubunkins